Tirada dhimashada qaraxii makhaayada Luul Yemeni oo gaartay 22 qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTirada dhimashada qaraxii makhaayada Luul Yemeni oo gaartay 22 qof
March 6, 2021 Abdi Omar Bile Somalia 0
Kooxda gargaarka degdega ah oo sida qof ku waxyeeloobay qaraxa. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dhimashada qaraxii gelinkii dambe ee Jimcada ka dhacay makhaayad kutaala Muqdisho ayaa gaartay 22 qof, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan laamaha ammaanka.
Qaraxa ayaa ka dhacay makhaayada Luul Yemeni, taasoo ah meherad caan ah oo u dhow dekada Muqdisho.
Intooda badan dadka qaraxa ku geeriyootay ayaa ahaa dad shacab kuwaasoo halkaas ku qaadanayay fasaxa Jimcada.
Al-Shabaab, oo ah maleeshiyo argagixiso ah taasoo dowladda Soomaaliya dagaal kula jirtay tobankii sanno ee u dambeysay, ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas.
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa maanta oo Talaado ah u dabaaldegaysa maalinta sanadguuradeeda 19-aad. Gobolka oo dhan, xafiisyada dowladda iyo meelaha wax lagu barto ayaa xiran munaasabada sanadguurada darteed. Ma jirto dhoolatus milatari oo dhacaya, balse [...]